Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: 2009
ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ် MR.SUEMATSUမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးအား ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်း။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီလွှတ်တော်အမတ်နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ဆောင်ရွက်နေသော ဂျပန်လွှတ်တော်အမတ်များ သမဂ္ဂ -အတွင်းရေးမှူး MR.SUEMATSU မှ ဂျပန်နိုင်ငံ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ကြသော ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုအဖွဲ့့အစည်းအသီးသီးအား ညစာဖြင့်ကျွေးမွေးဧည့်ခံ၍ မြန်မာ့အရေးကို ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဥက္ကဌဦးသန့်ဇင်ဦးနှင့်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင် များတက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။
Posted by yahutha at 2:59 AM0comments
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၅လ၊(၇၇)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၅လ၊(၇၇)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဂျပန် ရောက် ဗမာပြည်သူပြည်သားများ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ အဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှညီအကိုမောင်နှမများ ပူပေါင်းပါဝင်ကြရာ အယောက် ၁၅၀ခန့် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by yahutha at 2:34 AM0comments
This is the dedicated song for "Aung San Suu Kyi" composed and sung byafamous American Red Indian Singer "Timo & The White Buffalo". Video by "Burma Democratic Concern (BDC).
Posted by yahutha at 3:00 AM0comments
U2 360° Tour from Norman, OK, October 18, 2009. Excerpt of the song "Walk On" dedicated to Aung San Suu Kyi, the imprisoned leader of Burma (Myanmar) and 1991 Nobel Peace Prize recipient. Peace to all Peoples and Nations!
Posted by yahutha at 1:32 AM0comments
Posted by yahutha at 7:34 PM0comments
မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းချထားသည့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း.။....။(ဂျပန်နိုင်ငံ)
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးသည် ပထမ" "ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးသည် အဓိက" ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူ မြန်မာလူမျိုးများ၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး စိတ်ဝင်စားသူ ဂျပန်လူမျိုးများ စုစုပေါင်း အင်အား(၃၅၀)ခန့်က ယနေ့ညနေ (၅)နာရီကဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ Otsuka ပန်းခြံမှ Ikebukuro ပန်းခြံအထိ ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ခတ္တရောက်ရှိနေသော NCUB နှင့် FTUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမောင်မောင်မှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများက အမှာစကားများပြောကြားကြပါတယ်။ ယနေ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကြွေးကြော်သံများတိုင်ကာ လူစည်ကားရာ Ikebukuro မြို့ကိုဖြတ်သန်းပြီး ဂျပန်ပြည်သူများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်နိုင်ငံအကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဝေငှခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားကို ညနေ(၆)နာရီ တွင် Ikebukuro ပန်းခြံတွင် ကြွေးကြော်သံများတိုင်ကာ အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။...။
Posted by yahutha at 8:38 PM0comments
ဂျပန်နိုင်ငံ သံဃာ့ပဝါရဏာ ကံဆောင်ပွဲနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း။...။
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ သံယာပဝါရဏ ကံဆောင်ပွဲကို ဂျပန်လူမျိုးထေရဝါဒ ရဟန်းတော်များနှင့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ နံနက် ၉နာရီခွဲခန့်က အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို တိုကျိုမြို့ OOYAMA မြို့၌ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။....။
Posted by yahutha at 10:50 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁လနှင့်၂၀ရက် ပြည့်တဲ့နေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ.. ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း ၂၁ နှစ်မြောက် ကြေငြာချက်။
Posted by yahutha at 10:08 PM0comments
Posted by yahutha at 10:07 PM0comments
Labels: အခန်းအနား ဓာတ်ပုံ
ဂျပန်သတင်းထောက် နာဂအိဂန်းဂျိအသတ်ခံရမှု ၂နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
2009年9月26日 2114　ミャンマーで反政府デモを取材していたジャーナリスト・長井健司 さんが射殺されてから２７日で２年となる。当時、事件の映像をい ち早く世界に発信した反政府系放送局の活動を、山下雄三記者が取 材した。　ミャンマーの軍事政権によって命を奪われた長井さん。その瞬間を 撮影していたのは、ミャンマー人のジャーナリストだった。メディ アに対し、厳しい弾圧を続ける軍事...
Posted by yahutha at 9:26 PM0comments
Posted by yahutha at 2:51 AM0comments
Posted by yahutha at 2:38 AM0comments
တောင်းပွဲကို SOBU LINE ,OGIKUBO STATION,NORTH EXITရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် မွန်းလွဲ၂နာရီခွဲမှစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာဂျပန်ရောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊မြန်မာတိုင်းရင်းသားများပါဝင်ပူးပေါင်း
Labels: ဓါတ်ပုံ- ကိုပွား သတင်း-NLD(LA)JB လူငယ်ဌာန
Posted by yahutha at 6:18 PM0comments
Posted by yahutha at 6:09 PM0comments
၂၁ နှစ်မြောက် စစ်အာဏာသိမ်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ...။
Posted by yahutha at 3:31 AM0comments
Labels: ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, သတင်း
အကျဉ်းသား ၇၀၀၀ ကျော်လွှတ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းငယ်သာပါဝင်
Yukio Hatoyama, who will be Japan's next prime minister, addresses members of his Democratic Party of Japan atameeting in Tokyo, 15 Sep 2009
Posted by yahutha at 3:20 AM0comments
sent by Maung Kyaw M.A(NLD)
Posted by yahutha at 2:27 AM0comments
ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်း နှင့်ပတ်သတ်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပရေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်(ဂျပန်နိုင်ငံ)
ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်း နှင့်ပတ်သတ်သည့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပရေး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။...။
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၂နှစ်ပြည့်ထောက်ခံ ကြေငြာချက်။(မြန်မာ)
Posted by yahutha at 3:42 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁လတိတိ ပြည့်တဲ့နေ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲ.. ။
နှလုံးသားမှာ ရေးထိုးထားရမယ့် မော်ကွန်းကျောက်စာ.......၊၊
Posted by yahutha at 5:15 PM0comments
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၃လ၊(၇၅)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကျင်းပ။..။
မေ ၃၀ ဒီပဲယင်း လုပ်ကြံမှု ကြီး (၆)နှစ်၃လ၊(၇၅)လ ပြည့်် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)ဂျပန်ဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဂျပန် ရောက် ဗမာပြည်သူပြည်သားများ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ အဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှညီအကိုမောင်နှမများ ပူပေါင်းပါဝင်ကြရာ အယောက် ၁၃၀ခန့် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ဓါတ်ပုံ။ဗွီဒီယို။ ။ကိုပွား သတင်း။ ။ NLD(LA)JB လူငယ်နှင့်ကျောင်းသားရေးရာဌာန
Posted by yahutha at 8:15 PM0comments
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲံ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများ နှင့်အမေရိကန် ကွန်ကရက်ရဲ့ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ။...။
ယနေ့ ညနေ၄နာရီမှ ၅နာရီ အထိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ အဖွဲ့ချုပ်CEC အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနဲ့ အမေရိကန်ကွန်ကရက်မှ ဝန်ထမ်းများ ၁နာရီခန့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
" ဒီနေ့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ CEC အဖွဲ့ဝင် လေးဦး၊ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင် အန်ကယ်အပါအဝင်နှစ်ဦး၊ ရုံးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး တို့နဲ့ အမေရိကန်ကွန်ကရက် အမျိုးသားတဦး၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၊ ဒီကဋ္ဌာနေ နှစ်ဦးပေါင်းငါးဦး ၁နာရီလောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ သူတို့က မေးခွန်းတွေ အချက်အလက်တွေ လာရောက်မေးမြန်းတာပါ။
ပထမဦးဆုံး မေးတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ၂၀၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်တဲ့။
အကျဉ်းထောင်ထဲက နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ နေထိုင်ရတဲ့အခြေနေတွေ သိချင်ပါတယ်လို့ မေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့မေးခွန်းကိုတော့ ဦးခင်မောင်ဆွေနဲ့ ဦးအုန်းကြိုင်တို့က ထောင်တွင်း အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေး လွတ်လပ်ခွင့် စတဲ့အခြေအနေတွေကို ရှင်လင်းပြောပြပါတယ်။
ဒုတိယ မေးခွန်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို မေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေ၊ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဥပဒေကို အန်ကယ်က ရှင်းပြရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အခုလိုနေအိမ် အကျယ်ချုပ်နေရတာ ဥပဒေအရ ထိန်းသိမ်းခံရတာ မဟုတ်ဘူး အမိန့်အာဏာအရ ထိန်းသိမ်းခံရတာ ဖြစ်ကြောင်း အန်ကယ် သေသေချာချာ ရှင်းပြတော့ သူတို့တော်တော် အံ့သြကြပါတယ်။
နောက်တခုက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သဘောထားကို မေးပါတယ်။ လက်ရှိအခု နယ်စပ်ကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ ဒီရက်အတွင်းမှာ တချို့အဖွဲ့ အစည်းတွေက ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေလည်းမရှိသေး၊ ပါတီဖွဲ့ဖို့ ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ဥပဒေလည်း မထွက်သေးပဲနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေတင်နေတာကို အစိုးရက ဘာကြောင့်ခွင့်ပြုထား တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှင်းပြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ NLD အနေနဲ့ Yes Or No ပြောလို့မရသေးကြောင်း ဆရာဦးညွန့်ဝေက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တချက်က လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေပေးဖို့ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက် Sanction နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သဘောထားကို မေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကို NLD ရဲ့ရှိပြီးသားပေါ်လစီ ဖြစ်တဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းရမယ်၊ တာဝန်ယူမှုရှိရမယ် စတာတွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရရဲ့မူဝါဒ အပြောင်းအလဲရှိမရှိ အန်ကယ်တို့က မေးပါတယ်။ သူတို့က အမေရိကန် အစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး ကွန်ကရက်နဲ့တာ သက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြာရေး မူဝါဒ ပြောင်းလဲရေးအတွက် OBAMA အစိုးရက အလေးအနက်ထားတဲ့ အကြောင်း ဒါပေမယ့် အချိန်တို အတွင်းမှာတော့ ခပ်မြန်မြန် ပြောင်းလဲတဲ့မူဝါဒချစရာ မရှိသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အဓိကကတော့ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားတဲ့ အကူအညီတွေပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရေး အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ အန်ကယ်မြင်ပါတယ်။
မစ္စတာဂျင်မ်ဝက်ဘ် ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မစ္စတာဂျင်မ်ဝက်ဘ်ဟာ အိုဘားမားအစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ကြောင်း၊ အစိုးရရဲ့တာဝန်ခံ ပြောနေတာမဟုတ်ကြောင်း အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲသို့ NLD CEC မှ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ပြန်ကြားရေးမှ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးအုန်းကြိုင် နဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှ ဦးလှမင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဘက်မှ ဒီမိုကရက်တစ် ကိုယ်စားလှယ် ၂ဦး၊ ရီပါပလေကန် ၁ဦးနဲ့ ဋ္ဌာနေကိုယ်စာလှယ် ၂ဦး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
Posted by yahutha at 3:18 PM0comments
ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးရုံးရှေ့ ကြံ့ဖွတ်အတွင်းရေးမှုးဋ္ဌေးဦးအား ဖိတ်ခေါ်မှု ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ။....။
Posted by yahutha at 9:37 PM0comments
၂၃-၈-၂ဝဝ၉ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပမည့် “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး” ချီတက်ဆန္ဒပြမည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး” ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကို လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
1. စုရပ်အဖြစ် Ebisu ပန်းခြံအား နေ့လည် (၁)နာရီမှ (၃)နာရီထိ အသုံးပြုခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။
2. ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲနေ့တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲမည့်သူများအား မွန်းလွဲ (၁)မှ စတင်စုရုံးပါမည်။ မွန်းလွဲ (၁)နာရီခွဲ တွင် အခမ်းအနား စတင်လျက် မွန်းလွဲ (၂)နာရီခွဲတွင် စတင်ချီတက်ဆန္ဒပြပါမည်။
3. ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲ ဂိတ်ဆုံး ပန်းခြံမှာ Sendagaya ဖြစ်ပါသည်။
Posted by yahutha at 3:57 AM0comments
Posted by yahutha at 3:43 AM0comments
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ထောက်ခံအားပေးသော နိုဘယ်လ်ဆုရှင် သမ္မတဟောင်း ကင်ဒေဂျုံး ကွယ်လွန်သွားခြင်းအပေါ် လေးစားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲံ့ချုပ် CEC လူကြီးများ မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နှင့် တွေဆုံခဲ့။..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် CEC အဖွဲ့ဝင်လူကြီးများ မနေ့က နေပြည်တော်မှာ အထက်လွှတ်တော် အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
မနေ့က နေပြည်တော်မှာ NLD CEC အဖွဲ့ဝင်လူကြီးတွေနဲ့ အထက်လွှတ်တော် အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတခါ တွေ့ဆုံခွင့် အချိန်ရရှိခဲ့တယ် ပြောပါတယ်။ NLD အနေနဲ့တောင်းဆိုချက် ၃ခုတောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်က ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေကို ပြောဆိုပေးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။ ဒီတခေါက် တွေ့ဆုံခွင့်ရတာကိုတော့ တစိတ်တပိုင်း ကျေနပ်မှု ရှိတယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောပါတယ်။ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အချက်၃ချက်ကတော့
၁....ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်တကွ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး။
၃....၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေကို ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ပြန်လည် Rivew လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ မိနစ်၄၀လောက် တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ သိရပေမယ့် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ အန်ကယ်တို့မသိရပါဘူး။ ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တဦးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by yahutha at 12:50 PM0comments
ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့လည်၂နာရီမှ ၄နာရီ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ရှေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မတရားဖမ်းဆီး စီရင်ချက်ချမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ
Posted by yahutha at 2:13 AM0comments
တိုင်းပြည်ဟာ.. တော်လှန်ရေးမြူထဲမှာ.. မှောင်အတိကျခဲ့တယ်..။
ငါတို့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး.. အ၀၀
ငါတို့.. ဆာဟာရထဲက အိုအေစစ်သံလို ချိုမြတယ်...
ငါတို့ ရဲ့အဟာရ အသစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်...
Posted by yahutha at 11:47 PM0comments
Posted by yahutha at 10:43 PM0comments
ကြိုးအားလုံးပြတ်နေတဲ့ ဂစ်တာမှာ အသံရှိတယ်
ကြေမွနေတဲ့ မှန်စတွေပေါ်မှာ အသံရှိတယ်
သဲကြိုးပြတ် ဖိနပ်တစ်ရံမှာ အသံရှိတယ်
သွေးစွန်းတဲ့ အင်္ကျီတစ်စမှာ အသံရှိတယ် ။
ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်မှု့မှာ အသံရှိတယ်
ထော့နေတဲ့ ခြေတစ်ဖက်မှာ အသံရှိတယ်
သွေဖီစည်းမျဉ်းတွေအောက်မှာ အသံရှိတယ် ။
ဝါကျင်ကျင် မီးလုံးလေးမှာ အသံရှိတယ်
မျက်မှန်ဟောင်းကို စမ်းတဲ့လက်မှာ အသံရှိတယ်
ပင့်ကူမျှင်တွေနဲ့ မျက်နှာကျက်မှာ အသံရှိတယ် ။
ပုရွက်ဆိတ်တက် ထမင်းကြမ်းခဲမှာ အသံရှိတယ်
လွင့်တက်လာတဲ့ မြောင်းပုတ်နံ့မှာ အသံရှိတယ်
စိုနေတဲ့ ပါးနှစ်ဖက်မှာ အသံရှိတယ်
အသံမှာ အသံရှိတယ် ။
လင်သေ သားပျောက် မုဆိုးမတစ်ယောက်ရဲ့
မျှော်လင့်ချက်မှာ .. .. .. .. .. .. .. အသံမဲ့တယ် ။
ရင်ဘတ်ရှိသူတိုင်း အဲဒီ အသံတွေကို
မခင်လေးငယ် ကဗျာအတိုင်း တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အာဇာနည်တိုင်းကို အသံဖြစ် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်ဘလော့မှ (link) ရယူပါသည်။
Posted by yahutha at 10:39 PM0comments
Posted by yahutha at 1:51 AM0comments